DF oo ka hadashay mashaqada mushahar la’aanta, xilli ay muuqanayso mabda’ xumada Ciidamada Dowladda qaarkood! | Hadalsame Media
DAAWO: Sababta ay NASA ku dhowaad 2 milyan oo liitar oo…
Ruushka oo dejiyey xeelad uu dhirbaaxo dhaqaale oo KULUL uu kula…
Oday wayn oo fannaanad caan ah oo uu qabey 3 xabo…
Ruushka oo Ukraine ku ridey gantaal casri ah oo dayax-gacmeedka lagu…
Xujeeyda Soomaaliyeed oo markale ADEEG xumo & dayacaad ka ashtakoonaysa!!
Home Arrimaha Caalamka DF oo ka hadashay mashaqada mushahar la’aanta, xilli ay muuqanayso mabda’ xumada...
DF oo ka hadashay mashaqada mushahar la’aanta, xilli ay muuqanayso mabda’ xumada Ciidamada Dowladda qaarkood!
(Muqdisho) 17 Maarso 2019 – Wasaaradaha Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya iyo Taliska Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa waxay ku howlan yihiin diiwaan-gelinta Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed si loo loo tayeeyo howlaha ciidanka loona hubiyo xuquuqda ciidanka.
”Askari walba oo diiwaan-gelintiisa la xaqiijiyay waxa uu qaataa mushaarkiisa oo si toos ah loogu shubo koontadiisa bangiga.” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga.
Sidoo kale waxaa loo billaabay in 30 doolar oo kamid ah qoondada raashinka askarta si toos ah loogu shubo koontada uu askarigu bangigiisa ku leeyahay marka la xaqiijiyo diiwaan-gelintiisa.
”Ciddii la diiwaangeliyay ee aan weli helin xaquuqdooda billaha ah waxaa ku socda xaqiijin rasmi ah, sidoo kale waxaa wali socda diiwaan-gelinta ciidanka,waxaana ciidamada la diiwaan geliyay lagu amray inuu ku sugnaadaadaan goobtooda shaqada.” ayuu dhignaa warka kasoo baxay DF.
Waxay doodi ka joogtaa qaabka loo far iyo suulin karo arrintan iyadoo aanu dhicin wax is dar dar ah.
”Inta ay socoto diiwaan-gelintu waxaa laga codsan doonaa ciidamada qaarkood in ay yimaadaan goobo ku dhow goobtooda shaqo, sida kuwa dhanaane oo lagu diiwaan-gelin doono Jazeera, kadibna ay dib ugu laaban doonaan goobtooda shaqo.” ayay soo jeedisey WG.
Wasaaradda Gaashaandhiga iyo Taliska Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ciidanka ku wargeliyay inta ay diiwaan-gelinta socoto askari walba uu ku uu heli doono xuquuqdiisa oo buuxda marka ay soo dhammaata diiwaan-gelinta.
Dowladda Soomaaliyeed waxa ay ku guulaysatay in ay si joogto ah u bixiso mushaaradka askarta labadii sano ee la soo dhaafay, laakiin labadii billood ee ugu dambaysay ayaa waxaa soo baxay inaan la bixinin mushaharka ciidamada DF oo la sheegay inay qaarkood xitaa kasoo bexeen furumihii dagaalka, taasoo muujinaysa inaysan wax MABDA’ QARAN lahayn ciidamada sidaa yeelay, balse ay mushahar uun eegtaan, taasoo ay eeddeeda ugu badan leedahay isla DF.
Previous articleDHEGEYSO: Wax kasta oo aad uga baahan tahay kulanka Derby della Madonnina (Tebintii Xaaji)
Next articleDHACDO QAMUUNYO LEH! Qarreen wiilkiisa ku khaarajiyay magaalada Nairobi
DAAWO: Sababta ay NASA ku dhowaad 2 milyan oo liitar oo biyo ah ugu adeegsato gemista dayax-gacmeedka?
Ruushka oo dejiyey xeelad uu dhirbaaxo dhaqaale oo KULUL uu kula dhufan karo reer Galbeedka
Oday wayn oo fannaanad caan ah oo uu qabey 3 xabo ku dhuftay + Sawirro
hadalsame - June 25, 2022
(Hadalsame) 25 Juun 2022 - NASA ayaa waxay 60 ilbirqisi oo qura ku isticmaashaa ku dhowaad nus milyan galaan oo biyo ah marka ay...
Ruushka oo Ukraine ku ridey gantaal casri ah oo dayax-gacmeedka lagu hago + Sawirro
(Hadalsame) 10 Juun 2022 - Dhammaadka lixdameeyada qarnigii tegay ayuu Lee Shin Cheng oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Malaysia shaqo...
QISO ANFACAYSA MADAXDA: Maxaa dhacay markii uu Cumar uu dabagal ku sameeyey guri uu geli jirey Abuubakar Al Sidiiq?!!